China okuzenzakalelayo High Speed ​​Varnishing futhi Calendering Machine ifektri kanye nabaphakeli | USunkia
♦ Lo mshini usebenzisa uhlobo lwamanzi okususa i-powder, olungasusa uthuli kukayinki wokuphrinta futhi luthuthukise ikhwalithi yokukhiqiza. Ikhanda lokulethwa kukawoyela lithatha isondo lenjoloba elenza kahle futhi eliqinile, ukunemba kocwecwe oluyisidina-ukuhlanza kulula ngaphandle kokulimaza ithangi likawoyela. Ummese ungasetshenziswa futhi isikhathi eside. Ngaphezu kwalokho, ukuncipha kwephepha langemuva kungagcinwa njalo.
95kw (Uhlobo lokushisa lukagesi), 38kw (Uhlobo lwe-Steam)
102kw (Uhlobo lokushisa lukagesi), 40kw (Uhlobo lwe-Steam)
Langaphambilini Okuzenzakalelayo High-Speed ​​Amatebhe Iwindi wokuvikela ngocwazi Machine (Glue Water-based / Glue Oily / Pre-camera Film)
Olandelayo: Isivinini Esisheshayo Esiphelele sekhanda ezine se-UV Varnishing Machine (uhlobo olunemisebenzi ehlukahlukene) Ukudaya, ubuhlakani, Ukugcoba Kwama-Matte